मल्टिप्रपोज इन्स्टिच्यूटहरुमा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / मल्टिप्रपोज इन्स्टिच्यूटहरुमा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ
मल्टिप्रपोज इन्स्टिच्यूटहरुमा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ
Posted by: युगबोध in विचार 11 days ago	0 16 Views
नेपाल सरकारले लिएको १३ अर्ब ऋणबाट श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्टले लगानी गर्न लाग्नुभएको सामाजिक सञ्जालअन्तर्गत युवालाई सीपमूलक योजना कार्यक्रमहरु दीर्घकालीन सोचबिना हचुवाको भरमा ल्याएका अस्थायी कार्यक्रमहरु भरपर्दो छै नन्। यसरी राज्यले तीन करोड नेपाली नागरिकको टाउकोमा ऋण थुपारेर लिएको रकम राज्यले राष्ट्रिय योजनामा लगानी लगाउनुपर्दछ। साच्चै नै मन्त्री वा राज्यले युवावर्गमा सीपमूलक योजना र भिजन ल्याएर खोल्ने हो भने नेपालमा विदेशीहरुको जस्तै स्तरीय स्पेसिफाइड स्किल वर्कर संस्था जस्तै पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट संस्था खोल्नुपर्दछ। १३ अर्ब ऋण ल्याएर हचुवाका भरमा स्तरहीन सीप ज्ञान दिएर १३ अर्ब रुपै या“ केही समूह र समयका लागि कार्यक्रम बनाएर खर्च भएको देखाएर यत्रो रकम सर्वनाश नगरौ ं।
१३ अरब रुपै यॉ सानो धनराशी होइन, सिटिभिटि (ऋत्ख्त्) आफै मा अव्यवस्थित तरिकाले स्तरहीन सीप दिइराखेको छ। नेपालको ऋत्ख्त् सीप तालिम विदेशमा चल्दै चल्दै न। सा“च्चै स्तरीय ढंगबाट प्राविधिक सीपमूलक कार्यक्रमहरु ल्याएर राज्यले चलाउने हो भने दीर्घकालीन सोचबाट राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय परियोजनामा सरकारले जोड दिन नितान्त आवश्यक छ। स्पेसिफाइडस्किल वर्कर टेक्निसियन उत्पादनमा नेपाललाई स्तरीय ढंगबाट प्राविधिक उत्पादन गर्ने हो भने अब नेपालमा अत्याधुनिक इक्वीपमेन्ट सहितको केही समयसम्मका लागि विदेशी प्रशिक्षकबाट प्रशिक्षकहरु उत्पादन नहु“दासम्म तालिममा विदेशी प्रशिक्षकहरु प्रत्यक्ष सहभागितामा उपस्थिति बनाइ पोलिटेक्निकल मल्टी प्रपोज इन्स्टिच्यूट संस्था चार वर्षे फूल प्याकेजमा तालिम प्रशिक्षण दिनुपर्दछ। यस्तो प्रकारका तालिम सफल गरेका प्रशिक्षार्थीहरु डिप्लोम्याटिक प्रोफेसिनल स्किल वर्कर अर्थात ब् क्याटगोरीमा पर्दछन्। विदेशमा यसको डिमाण्ड र महत्व बढेर जान्छ। त्यसै ले एकपटक खर्च गरेर पुस्तौ ंपुस्ता पिढी युवाहरुलाई बलियो र भरपर्दो प्राविधिक उत्पादन गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान पु¥याउनै पर्छ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्रीले यसरी हचुवाका भरमा दीर्घकालीन सोच बिना छोटो समयमा हाइलाइटमा आउने काम गर्नुहु“दै न हाइलाइट त दीर्घकालीन योजनाबाट आउन सकिन्छ। ऊर्जामन्त्री जसरी लाइटमा आउनुभएको थियो तर यो विधा फरक पाटो हो। यसमा अर्थात १३ अर्ब रुपै या“बाट खर्च गरेर पाउने र ल्याउने योजना हुन्। हचुवाका भरमा १३ अर्ब रुपै या“ तीन तीन करोड नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार लागेको छ । त्यसै ले छोटो कार्यकालका लागि ठूलो धनराशी बरबाद गरिनुहु“दै न। दीर्घकालीन योजनामा खर्च गरिनु पर्दछ। योजना बनाउ“दा दीर्घकालीन, पारदर्शी, उपलब्धिका लागि लिइएको १३ अर्ब रुपै या“ विश्व बै ंकलाई तिर्ने योजनाका कार्यनीतिहरु बनाइ पारदर्शी अडिट प्रत्यक्ष नागरिकको सरोकारमा गरिनुपर्दछ। श्रममन्त्रीज्यू बेलै मै तपाइ“ले दीर्घकालीन योजना छान्नुहोस् । मल्टीप्रपोज पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट संस्थाको योजना लागु गर्नुहोस्। तपाइ“को लामो समयदेखि बनाएको राजनीति कै रियर समाप्त पार्न सक्छन्। त्यसै ले मन्त्रीज्यू होशियारीका साथ चलाकीपूर्ण तरिकाबाट खर्चिनुपर्दछ। किनकि १३ अरब रुपै या सानोतिनो रकम होइन।
तीन करोड नेपाली नागरिकको टाउकोमा थुपारेर प्राप्त गरेको हु“दा यो रकम प्रत्येक नागरिकले एक–एक हिसाब कितावहरु खोज्नेछन्। त्यसै ले योजना दीर्घकालीन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यदि हचुवा कार्यक्रममा तपाइ“ले आफ्नो मन्त्री पदको दम्भ देखाएर कार्यक्रम गलत तरिकाले खर्चिनुभयो भने हामी नागरिकहरुले तपाइका योजनामाथि शंका गर्नुपर्नेछ। मन्त्रीज्यू तपाइले विश्व बै ंकबाट लिनु भएको ऋण आमनेपाली नागरिक र नेपाल राज्यको नाममा लिइएको ऋणको भार तपाइको कारणले हामीले तिर्नुपर्ने चाहि हुने तर हामी नागरिकका योजना र विचारमा मान्य वा लागु नहुने कस्तो बिडम्बना छ † यो १३ अर्ब रुपै या“ बिलकुल सही योजना, सही नीति कार्यक्रममा खर्चिनु पर्दछ। प्राविधिक इन्स्टिच्यूटमा पारदर्शी र सिष्टममा खर्च गरिनुपर्दछ। नागरिकहरुको टाउकोमा ऋण थुपार्ने जिम्मा लगाउने गरी लिएको ऋण नेपाल सरकारले किन दिगो सोचाइका साथ राष्ट्रिय योजना ल्याउदै न। यदि एक पटक े पारदर्शीढंगबाट प्राविधिक संस्था खोलेपछि नेपालका भविष्यका र हालका युवाहरु समेत पुस्तौ पुस्तामा सीपमूलकबाट परिवर्तन भइ यो नेपाल राज्यमा युवाहरु प्राविधिकमय हुने थिए। सम्मानीय श्रममन्त्रीज्यू तपाइले १३ अरब रुपै या“ तीन करोड नेपालीको टाउकोमा जिम्मा हुने गरी लिनुभएको रकम तपाइ“ले योजनामा त खर्चिनुहुने नै छ। तर तपाइ“ले विश्व बै ंकलाई ऋण फिर्ता गर्ने योजना बनाउनुभएको छ छै न ? ऋण कसरी तिर्ने ? तिर्ने योजना के छन् ? कुन स्रोतबाट तिर्ने ? कृपया तपाइ“ले जवाफ दिदा हुन्छ। हचुवाका भरमा हामी नागरिकहरुको टाउकोमा र राज्यलाई ऋणको भार लगाउन पाइन्न। ऋण लिनेले ऋण तिर्ने योजना बनाएर मात्र ऋण लिनुपर्छ। नत्र भने भविष्यमा अख्तियारबाट कठघरामा कानुनी उपचार हु“दा हामी बाईबाई हुनेछौ ं भन्ने कुरा भविष्यले नै बोल्नेछ। १३ अर्ब रुपै या“ कहा“ कुन शीर्षक र योजनामा खर्च हुदै छ। सम्पूर्ण हामी नागरिक सजग भएर चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि अख्तियारलाई सचेत हुन सूचना दिनुपर्दछ। भ्रष्टाचार हुन नदिन समयमै तीन करोड नेपाली नागरिकहरुले खबरदारी गर्नुपर्दछ।
तीन करोड नेपाली नागरिकको टाउकोमा थुपार्ने गरी लिइएको ऋणबाट श्रममन्त्री तथा सरकारले दिगो राष्ट्रिय योजनामा स्तरीय पोलिटेक्निकल मल्टी इन्स्टिच्युट संस्था प्राविधिक उत्पादन संस्था खोल्नुपर्दछ। चार वर्षे फूल प्याकेजमा डिप्लोम्याटिक प्रोफेसनल स्किल वर्कर उत्पादन गरिनुपर्दछ। १३ अर्बै विश्व बै ंकको सापटी ऋण कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भनेर तिर्ने योजना बनाइनुपर्दछ। ऋण लिएर ऋण तिर्ने योजनाको स्रोत खोजिनुपर्दछ। सरकारमा गएका बेला मन्त्रीले अगुवाइ गरेर राज्य र नागरिकको नाममा लिएको ऋणको मिसयुज भएमा जहिले पनि ऋण लिने मन्त्रीले नै तिर्नुपर्ने कानुनी धाराका उपधारामा कानुन बनाइनुपर्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार समाप्त नहु“दासम्म नेपाल समृद्ध हुनै सक्दै न।
Previous: गरिबका फेरिदै वास
Next: वन अतिक्रमण नगर